जसपाका बाबुराममाथि अर्को बज्रपात, माआवादीका प्रचण्ड खुसीले गदगद ! – GALAXY
जसपाका बाबुराममाथि अर्को बज्रपात, माआवादीका प्रचण्ड खुसीले गदगद !
काठमाडौँ – जनता समाजवादी पार्टीमा बज्रपात हुने भएको छ । सो पार्टीकी प्रभवशाली नेतृ नै नेकपा माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्न लागेकी हुन् । भारतीय चेली चर्चित नेतृ नेकपा माओवादीमा प्रबेश गर्न लागेपछि माओवादीमा खुसीयाली छाएको छ ।
पूर्वसांसद एबम् जनता समाजवादी पार्टीकी कार्यकारणी सदस्य सरीता गिरी नेकपा मओवादी केन्द्रमा प्रबेश गर्ने भएकी हुन् । उनले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपालीकै इमान्दार नेता रहेकाले माओवादीमा प्रबेश गर्न लागेको संकेत गरेकी हुन् ।
नेपालको नक्सामा कालापानी लगायतका भूमि समावेश गर्दा विरोध जनाएर सांसद पद गुमाएकी गिरीले नेपालका अन्य नेताहरु भन्दा प्रचण्ड इमान्दार देखिएकी बताएकी हुन्।
‘अरु नेताको तुलनामा प्रचण्ड नै इमान्दार छन्।’ प्रचण्डको प्रशंसा गर्दै गिरीले लेखेकी छन् । जनयुद्धबाट आएका प्रचण्डले आफ्नो इतिहास नभुलेको र आफ्नो दायित्वबाट नभागेको गिरीको भनाई छ।
‘जनयुद्धको आफ्नो इतिहाससंग प्रचण्डले नाता तोडेका छैनन् र त्यसको दायित्वबाट पनि भागेका छैनन्।’ गिरीले प्रचण्डका बारेमा थप लेखेकी छन्। अन्य नेताहरु जस्तो प्रचण्ड आफ्नो दायित्वबाट नभागेको गिरीको बुझाई छ। उनी लेख्छिन्, ‘उनी भगौडा जस्तो देखिएका छैनन्।’
गिरीलाई सांसद पदबाट हटाउन संसद र सडकमा चर्को आवाज उठेको थियो। त्यसपछि उनलाई समाजवादी पार्टी नेपालले सांसद पदबाट हटाएको थियो।
प्रचण्डको समर्थनमा बोल्न थालेपछि उनी माओवादी केन्द्र प्रवेश गर्न लागेको चर्चा शुरु भएको छ। पार्टी विहिन भएकी गिरी माओवादी प्रवेश गर्न सक्ने धेरैको अनुमान छ। तर यस विषयमा प्रष्ट भने भैसकेको छैन।